Nchọpụta sayensị na teknụzụ nke Australia | Njem zuru oke
Enweghi otutu ihe omuma nke sayensi na teknụzụ nke Australia dị ka ndị achọpụtara na mba ndị ọzọ nke ụwa. Ihe kpatara ya di mfe: Australia obu ala dị obere na, nfe, o nwebeghị oge iji mesie ike nke ukwuu na mpaghara ndị a.
Agbanyeghị, mba dị n'oké osimiri enyelarị anyị oke oke nke nchọta. Na, karịa ihe niile, nke nnukwu mkpa maka sayensị na nnọọ ewu ewu na usoro nke Usoro. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ihe ndị sayensị na teknụzụ ndị Australia mepụtara, anyị na-akpọ gị oku ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Isi Australian sayensị na nkà na ụzụ mepụtara
1.1 Nchọpụta sayensị nke Australia
1.1.1 Ojiji nke penisilini
1.1.2 Onye akasi obi
1.1.3 Ọrịa Papilloma mmadụ
1.1.4 Na cochlear ịkụziri
1.1.5 Ihe nyocha nke ultrasound
1.1.6 Nchekwa gburugburu ebe obibi site na mmiri coral
1.2 Mmepụta teknụzụ Australia
1.2.2 Igbe ojii nke ugbo elu
1.2.4 Igwe ọkụ eletrik
1.2.5 Igwe nju oyi
Isi Australian sayensị na nkà na ụzụ mepụtara
Dika anyi gwara gi, onwere ugbua otutu onu ahia nke ndi Australia mere. Maka nke a, na iji mee ka nkọwa anyị doo anya, anyị ga-ebu ụzọ kwuo maka ụfọdụ ihe dị mkpa maka sayensị na ndị ọzọ kachasị mkpa maka teknụzụ.
Nchọpụta sayensị nke Australia
Banyere ihe ndị a, mepụtara Australia abawanyela uru Ahụike mmadụ (dịka anyị ga-ahụ ozugbo, ha nwere penicillin) na gburugburu ebe obibi. Offọdụ nchoputa ndị a bụ ihe anyị ga-akọwara gị.
Ojiji nke penisilini
Onye ọ bụla maara na penisilini bụ nchọta nke ndị Britain Alexander Fleming na 1928. Agbanyeghị, amachaghị nke ọma bụ na ha bụ ndị Australia Howard W. Florey na German Ernst B. Chain onye haziri usoro a maka iji rụpụta ọtụtụ mmadụ, ihe ga-emechi ndụ ọtụtụ nde mmadụ. N'ezie, mgbe Fleming natara ya Nrite Nobel na 1945, ya na ndị ọrụ ibe ya abụọ mere ya.
Ibu e dere na nsọpụrụ nke Ernst B. Chain
Onye akasi obi
Ngwaọrụ ahụike a na-enye ndị ọrịa obi ohere idobe nke ha mgbe niile. Ọ na-ezigara obere ihe ọkụ eletrik na ngwa ahụ iji nyere ya aka ime nke a. Ọ bụ dibia bekee chepụtara ya Garlọ ndozi Edgar na dọkịta Onwuka Onyekwena, ma Australian, dị ka afọ ndị 1920. Otú ọ dị, iji ya emeghị nke ọma ruo XNUMX.
Ọrịa Papilloma mmadụ
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara ndị ọzọ batakwara, ọgwụ mgbochi a sokwa na ihe ndị sayensị Australia na teknụzụ rụpụtara n'onwe ya. Ha bụ ndị ọkà mmụta abụọ si Mahadum Queensland, Ian Fraser kwuru y Jian Zhou, bụ onye jisiri ike na -apụta urughuru yiri nke a virus na ike nke dịghịzi usoro megide ya.
Na cochlear ịkụziri
Ngwaọrụ a enyerela ọtụtụ narị puku ndị ntị chiri aka ka ha nụ ihe nke ọma. Etinyere ya n’isi ma jikwaa kpalite akwara auditory. Ọ bụ Graeme clark, prọfesọ na Mahadum Melbourne, onye mepụtara ya. Nna ya nwere nsogbu ịnụ ihe, ma ka na-achọ inyere ya aka, ọ chọpụtara ngwa ọrụ a bara uru.
Ihe nyocha nke ultrasound
Ngwá ọgwụ a ji arụ ọrụ taa ultrasound Ọ bụ Australian Commonwealth Acoustics Laboratory mepụtara ya, bụ nke mechara kpọọ aha ya Soundlọ Ultrasound. Ndị na-echepụta ya hụrụ ụzọ iji weghara ụda ultrasonic nke na-agbaghasị anụ ahụ nke ahụ anyị ma gbanwee ha n'ime onyonyo. Ahịa ya bidoro na 1976.
Nchekwa gburugburu ebe obibi site na mmiri coral
Dị ka ị maara, ndị Nnukwu ihe mgbochi ọ dị n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Australia. E nwere ihe karịrị puku abụọ na narị ise kilomita nke nnukwu mmiri n'okpuru mmiri nke dị ugbu a n'ihe egwu. Ikekwe nke a mere ndị Australia ji na-ebute ụzọ mgbe niile Oceanography.
El Australianlọ Ọrụ Australia nke Sayensị Mmiri amalite oru di iche iche ichekwa gburugburu. Otu n’ime ndị kacha apụta ìhè bụ nke a raara nye nchịkwa coral na-achịkwa. Ebumnuche ya bụ ịlaghachi ahịhịa ahụ n'ọnọdụ ha. N’aka nke ya, ihe ndị a bụ ihe dị ndụ na-eme ka nhazi gburugburu ebe obibi nke oké osimiri na ichebe ha na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na-enwe na ha.
Nnukwu ihe mgbochi
Mmepụta teknụzụ Australia
Ndị kasị ewu ewu na Australian nkà na ụzụ mepụtara bụ doro anya na WiFi, nke anyị ga-ekwu maka ya na-esote. Mana enwere ndị ọzọ rụkwara ọrụ iji melite nchekwa ikuku ma ọ bụ maka ebumnuche ndị ọzọ. Ka anyị hụ ha.
Njikọ ikuku na hasntanetị abịawo iji kwado ojiji nke a n'ụlọ na ọfịs. Ngwa dị otú ahụ bara uru bụ n'ihi onye ọkà mmụta sayensị Australia John O'Sullivan na ndi otu ya Sidney. Ha nile bu ndi CSIRO, aru ndi Commonwealth raara nye iji kwalite nyocha sayensị na teknụzụ.
Igbe ojii nke ugbo elu
Ngwaọrụ a nke ụgbọ elu gburugburu ụwa jikọtara taa na-eje ozi, dịka ị maara, ịmara ihe na-eme n'ụgbọ mmiri n'oge oge tupu ihe mberede. Edere mkparịta ụka niile nke onye na-anya ụgbọelu na akụkụ nke ụgbọ elu ahụ n'ime ya, nke bụkwa nke a na-agaghị emebi emebi. Onye chepụtara ya bụ onye Ọstrelia David warren, bụ́ onye nna ya nwụrụ n'ezie n'ihe mberede ụgbọelu.
Ọ bụghị naanị onyinye mba oke osimiri na-enye na nchekwa ụgbọelu. Na 1965, Jack Grant, onye ọrụ nke ụgbọ elu Quantas, kere ndị slide maka Mberede. A na-eji ya eme ka ndị njem gbadaa mgbe ọdịda dara.
Ọ bụ ezie na akpọghị ya n'oge ahụ, ọ bụ ndị Australia mepụtara ngwa ọrụ a bara uru Stephen Ma y Neil Gordon n'akụkụ Danes Lars na Jens Rasmussen na mmalite XNUMXs. Ọ bụ mgbe e mesịrị, mgbe Google zụtara ihe ahụ, ọ natara aha ya ugbu a.
Nwa igbe nke ụgbọ elu
Ọ bụrụ n’ị masịrị gị N'onwe Gị, ị ga-amata otu ngwa ọrụ a si eme ka ọrụ gị dị mfe. Ọfọn, ọ bụkwa ihe Australia mepụtara. N'okwu a, ọ bụ n'ihi na injinia eletrik Arthur James kwuru, onye mere nke mbụ dị ka afọ 1889. N'ezie, mgbe ahụ, ọ bụghị na-ebugharị ya, mana ọ ka ibu. Otú ọ dị, ọ nwere ikike ịkpọpu ọbụna nkume.
Friji ọdịnala nke taa dị ka ihe dị mkpa n'ụlọ anyị dị ihe dị ka otu narị afọ na iri ise. Mgbe ọ na-adịghị, a na-edebe nri n’ebe ndị mara mma n’ụlọ. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ ndị njikwa nke ebe a na-eme biya biya Australia bụ ndị goro ọrụ James nwa oge iji dozie nsogbu nke nchekwa umu ihe ọ hisụ hisụ ya na 1856.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ n'ime Mmepụta sayensị na teknụzụ nke Australia. Dịka ị pụrụ ịhụ, onyinye nke mba ndị dị n'oké osimiri na-enwe ọganihu maka ụmụ mmadụ abụwo ihe na-adọrọ mmasị na, karịa ihe niile, dị mkpa.
Economyakụkọ ihe mere eme
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Mmepụta sayensị na teknụzụ nke Australia
Ihe ha kwuru ma ọ bụ ihe ha kọwara dị mma
Zaghachi ka ana mercedes villalba G.